AC MILAN VS ARSENAL: Imisa jeer ayay horay isu arkeen labadan kooxood? – Gool FM
(Nyon) 24 Feb 2018 – Kooxda AC Milan ayaa ku aaddey kooxda Arsenal oo ay wada ciyaari doonaan kulan laba lugood ah oo ka tirsan wareegga 16-ka Europa League: Waa dabcan kulamo xiise badan oo aad loo sugayo, haddaba Gazzetta dello Sport ayaa dib u eegaya kulamadii ay labadan kooxi soo wada yeesheen.
Sanaddii 1994-kii, waxaa kooxda Gunners garaacday kooxda Rossoneri oo ay ku kulmeen European Super Cup. Sanaddii 2008, ayay markii 2-aad isku arkeen Champions League, lkn markan Arsenal ayaa Milan ka fil roonaatay oo guriga Gunners 0-0 ayay noqotay midka Milan na waxaa 2-0 ku badisay Arsenal.
Yeelkeede, sanaddii 2011-2012 ayay markale isku arkeen Champions League, waxaana markan aarsatay AC Milan oo kusoo baxday 4-3, Milan oo uu xilligaa Allegri watey ayaa 4-0 ku badisay San Siro, halka guriga Gunners 3-0 lagu dhuftay Rossoneri. Haddii lasoo gaabiyo waxay sheekadu maraysaa 2-1, 2 jeer waxaa libta qaadatay Milan, hal jeerna Arsenal.
Haatan waxaa 8-da bisha Maarso iska arkaya labada Turki ee Calhanoglu iyo Ozil, oo labaduba ka siman inay ku dhasheen Germany, kana dheelaan labar 10. Dhanka kale Rodriguez ayaa ka hor tegaya Xhaka, oo ay u wada dheelaan xulka Switzerland.
"Waxaa nala moodaa MATAANO marka meel fog nalaga arko, Laakiin shaki la'aan anigaa ka Qurux badan.".